Ny Foto-Kevitry Ny Fahalalana Ny Teknolojia - Tranok'alan'i Fethullah Gülen
Ny Foto-Kevitry Ny Fahalalana Ny Teknolojia
Na dia eo aza ireo loza ateraky ny siansa sy ny teknolojia, ny fomba fiasany mifandiso amin'ny fahamarinana sy ny tsy fahombiazany miantoka ny fahasambaran'ny olona dia tsy afaka manameloka azy isika ka hanjary ho vokalista madio rano. Tsy ny siansa sy ny teknolojia no tena tompon'andraikitra amin'ny fahapotehan'ny olombelona sy ny fahalemen'ny fihetseham-pony, ny fahamarinana, ny fahasalamana sy ny fahafahana misaina. Ny mifanohitra amin'izany, ny olona no mahatonga izany rehetra izany sy ny fitondran-tenany tsy tompon'andraikitra izay miteraka ny fivelarana ara-materialy fotsiny amin'ny siansa sy nametraka azy ho eo am-pelatanan'ny olombitsy tsy tompon'andraikitra sy liana ny hitrandraka azy fotsiny. Tsy ho nitranga ny vokany manimba raha tonga saina tamin'ny andraikitra ara-tsosialiny ny siantifika ary raha tsy nanosika ny siansa hametraka fomba mijery hanohitra azy ny fivavahana.
Toy ny zotra malaky feno hery sy fahavitrihana mankany amin'ny ho avy ary indraindray toy ny zaridaina mikoro, ny tontolo voajanahary mitovy amin'ny boky noalalinina, fanehoana ho dinihina sy vainga azontsika araraotina. Tompon'andraikitra amin'ny fianarana ny dika sy ny ao anatin'io vainga io isika mba ahafantsika sy ny taranaka ho avy manararaotra azy. Io fifandraisana io no azo antsoina hoe «siansa».
Azo faritana ho toy izay ao amin'ny zavatra sy ny ambaran'ny zava-miseho amintsika koa ny siansa, izay ambaran'ny lalàn'Andriamanitra amintsika sy ny ezaka hahatsapa ny tanjona haharian'ny Mpahary azy. Novolavolaina mba hanjaka eo amin'ny voary isika ka mila mandinika sy mamaky, manavaka sy mianatra izay manodidina antsika ma hahitana nyf omba tsaratsara kokoa hampiharantsika ny fahefantsika sy ny fifehezantsika.r aha mahatratra io faritra toy ny andidian'Andriamanitra io isika dia hanaiky antsika ny zava-drehetra ary hanaiky an'Andriamanitra isika.
Tsy misy antony tokony hatahorana ny siansa. Tsy mifototra ao amin'ny siansa ny loza, na nyf anorenana tontolo vaovao aterany fa ao amin'ny tsy fahalalana sy ny tsy fandraisana andraikitry ny siantifika sy izay mitrandraka ny siansa hoan'ny tombotsoan'izy ireo tia tena.
Raha mitarika ny haranitantsainan'ny olombelona mankany amin'ny mandrakizay tsy miandry ny tombontsoa materialy ny siansa, raha manao fandalinana antsipiriany mikasika ny fisiana mba hahitana ny marina izy sy manaraka nyfomba fiasa mifanaraka amin'izany mba hanatsarana io tanjona io dia tsy afaka milaza isika fa tsy mamaly ny filantsika ny siansa. Na dia toa miseho ho olana aza amin'ny ankapobeny ny fifandraisan'ny siansa sy ny kristianisma ny korontana izay manomboka tamin'ny fahaterahana indray dia ny fifandirana teo amin'ny siantifika vitsivitsy (fa tsy ny siansa ami'ny maha siansa azy) sy ny fiangonana Katolika. Tsy mpanohitra fivavahana i Gopermie, Galilée sy Bacou, azontsika lazaina aza fa ny andraikiny ara-pivavahana no manosika azy ho amin'ny fahamarinana siantifika.
Ny firaisana ara-pinoana ny mandrakizay sy ny fitiavana ary ny herimpo ara-pinoana avy ami'nizany, miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena fa mahantra sy tsy manan-kery eo anoloan'ny mpahary mandrakizay, mahery indrindra sy mahalala ny zava-drehetra no nampahazo vahan ny fivelarana siantifika ny tontolo silamo mandritry ny taonjato dimy hatramin'ny fiafaran'ny taon-jato faha XII.Ny foto-kevitra nampihetsika ny siansa izay mifototra amin'ny fanambaran'Andriamanitra dia nasehon'ireo olo-malaza izay vonton'ny fisainana ny mandrakizay, nandinika lalanadava ny fisiana hanatratra ny mandrakizay. Loharanom-pahazavana ho azy ireo ny firaketam-pony tamin'ny fanambaran'Andriamanitra izay niteraka fiheverana vaovao mikasika ny siansa tao amin'ny fanahin'ny olombelona. Raha tsy nosomparan'ny firohotana mahatsiravin'ny mongoba sy ny kristiana ny fansrosoana silamo dia ho samy hafa tanteraka amin'izao tontolo izao,u tontolo ankehitriny. Raha ny fiheveran'ny finoana silamo ny siansa no ekena sy ampihariharian'ny fiarah-monina heverina ho toy ny hafatr'Andriamanitra sy ampiharina oh toy ny fiderana, mitohy hatrany ny vonony dia namirapiratra kokoa ny tontolontsika. Nanakarena kokoa ny fiainany ara-tsaina, nadio ny teknolojiany ary nahavelom-panantenana ny siansany. Amin'ny fifotorana amin'ny hevitry ny mandrakizay no hikatsahan'ny siansa silamo ny hanapo ny olombelona amin'ny fanampiana antsika ho voasarik'ilay tontolo hafa sy hampiasa ny zavatra amim-pifandraisana andraikitra mba hahazoana ny hafinaretan'ilay ambony indrindra.
Ny fitiavana ny fahamarinana ihany izay faritana ho fitondrana ny fisiana tsy hanaganana tombotsoa ara-materialy na tombon-dahiny eto ahitany fa mba handinihana sy hamantarana azy tsara araka ny tokony ho izy no manome tondro zotra marina ami'nny fandinhana ara-tsiansa.
Ireo izay manam-pitiavana toy izany no mety hahatratra ny tanjony; izay tsy manana izany kosa fa tarihan'ny fitsiriritana izao tontolo izao amin'ny lafiny ara-materialy, ny fitompoanteny fantatra ara-kevitra sy ny fitiavana an-jambany fotsiny dia tsy hahomby na hanao ny siansa ho tsy ny fitaova-piadiana mahafaty mba hampiasa azy hanoherna ny olombelona.
Ireo avara-ppianarana, ny toeram-panabeazana sy ny haino aman-jery dia tsy maintsy manao izay azony atao mba hanala ny siansa manara-penitra amin'ny rivotra mahafatin'ny materialisma sy ny firaketana an-jambany amina foto-kevitra ankehitriny mba hamitan-dalana nysiansa ho an'ny lanjan'ny olombelona indray dia tsy maintsy miala amin'ny firaketana an-jambany amin'ny foto-kevitra tsy mahasoa sy amin'ny faniriana hahazo tombony ara-materialy. Hanome azy fahafahana ar-pisainana izany ary hamela azy hifantoka amin'ny siansa madio. Ny fifanoherana lava reny mandritry ny taonjato maro teo amin'ireo mpahay siansa sy mpitondra fivavahana sy ireo foto-kevitra diso namboamboarina tamin'ny anaran'ny fivavahana sy ny fanamelohanizy ireo ny mpivavaka ho toy ny misaintsaina sy very fisainana dia tokony ho lesona ho an'ireo mpahay siansa mba tsy hanaovany fahadisoana toy ireo izay hanamelohana azy.
Ny fnajakazakana ara-tsaina sy ara-tsiansa dia naterakay ny tombontsoa manokana, ny fihatsaram-pahfana, ny fotokevitra sy ny fanarahana vondron'olona an-jambany.
Mety hisy vondrona toy izany koa hipoitra eo amin'ireo mpahay siansa sy mpivavaka. Hanjakazaka ihany izay avy amin'ny mpanjakazaka na dia hanova ny heviny amin'ny alalan'ny foto-kevi-pivavahana nahodinkodina aza, na ny mitovitovy amin'ny ara-tsiansa. Mandrisika ny olona hanadihady ny tontolo mandrakariva ny finoana silamo satria ny voary dia fisehoan'ny asan'Andriamanitra ny voary sy hanao izany amin'ny fandrisana andraikitra mba hanasoavana ny olombelona.
Rehefa mandinika tsara amim-pahalalan-tsaina, ny CORAN dia manandratra ny fitiavana ny siansa sy ny olombelona, ny fandriampahalemana sy ny filaminana. Andininy maro ao amin'ny CORAN no manentana antsika hanadihady ny voary izay toerna hisehoan'ny asan'Andriamanitra. Araka ny finoana silamo, ny tanjona avon'ny fikatssaham-pahalalana dia mba hahafantaran'ny tena dikan'ny fisiana mba hanatsarana ilay mpahary sy hanovozantsoa amin'ny maha olona sy amin'ny voary amin'ny ankapobeny. Tsy maintsy ampifandraisintsika amin'ny finoana io fahalalana io, amin'ny fitiavana sy ny fiheverana ny hafa. Nahita tsar mba halain-tahaka ny zanak'olombelona: ny fiainan'ny mpaminany Mohammed sy ny fitondran-tenan'ireo solontenany izay nahomby tamin'ny fampitana ny asan'izy ireo sy ny fisainany.
Koa inona no hatahorantsika ny siansa? marina fa mety hiteraka voka-dratsiny ny asa aorina amin'ny fahalalana indraindray fa ny tsy fahafantarana sy ny tsy fahaiza-mandamina no tena miteraka voka-dratsy goavana mandrakariva. Tokony hampiasa ny vokatry ny siansa sy ny teknika mba hitondra fahasambarana ho an'ny olombelona isika fa tsy hiandry aminy. Eo indrindra no ifotoran'ny olana lehibe ho antsika satria isika dia tsy afaka mandray fe-petra hanoherana ny taonjaton'ny habakabaka na mamafa ny fahalalantsika amin'ny fanamboarana fomba atomika sy amin'ny hodrozana.
Na dia mety ho fitaovam-piadiana mahafaty eo am-pelatanan'ny olom-bitsy aza ny siansa dia tsy tokony hisalasala isika hampiasa azy sy ny vokany mba hametrahana fandrosoana afaka hiantoka ny fahasambarantsika eto an-tany sy any ankoatra. Tsy misy dikany sy tsy ilaina ny manozona milina sy toeram-panodinana satria mbola mitohy miasa ihany izy ireo. Tsy hanombo ho tsara amintsika ny siansa raha tsy olon'ny fahamarinana sy ny finoana no hitarika antsika amin'ny andraikitra.
Tsy mbola niharan-doza tamin'ny fitaovam-piadiana teny an-tanan'ny olona mifanahin'ny anjely isika. Tsy mbola miharitra afa tsy izay nataon'ny olona izay mino mandrakariva fa ny hery ihany no ambonin'ny zo iika. Hitohy izany toe-javatra izany manadrapahorenantsika tontolo mifototra amin'ny finonana sy ny siansa.